Napoli oo xaqiijisay in in ka badan 6 kooxood ay doonayaan Ciyaaryahankooda Ezequiel Lavezzi | Starfm.co.ke	Tuesday, May 21st, 2013	Home
Napoli oo xaqiijisay in in ka badan 6 kooxood ay doonayaan Ciyaaryahankooda Ezequiel Lavezzi
Share30.May.2012:- Madaxa sare ee Kooxda Napoli Aurelio De Laurentiis ayaa xaqiijiyay in laacibkooda Lavezzi ay doonayaan in kabadn 6kooxood.
Masuulkaan ayaa sheegay in xidigaan uu go’aansaday inuu isaga tago naadiga Napoli uuna dhawaan shaacin doono dooqa kooxda uu doonayo.
Aurelio De Laurentiisin oo ah madaxwaynaha naadiga Napoli ayaa qiray in koxoaha uu u caleema saranyahay weeraryahankooda Ezequiel Lavezzi ay u badan yihiin kuwa ka dhisan Horyaalada laga ciyaaro qaarada Yurub.
Lavezzi ayaa doonaya inuu xagaagaan isaga hayaamo garoonka kooxdiisa Napoli , waxaana uu ka mid ahaa xidigihii sida wayn uga dhex muuqday kooxdaasi xili ciyaareedkii idlaaday.
Warbixino Hoose oo la helay ayaa sheegaya in Kooxaha Manchester City, Paris Saint-Germain iyo Inter Milan ay ka mid yihiin naadiyada sida wayn u baadi goobaya laacibkaan reer Argentina.
madawaynaha Napoli oo arintaasi xaqiijinaaya ayaa sheegay : “6 kooxood ayaa siwayn ii waydiiya inaan ka iibiyo xidiga ‘Il Pocho’ (Lavezzi),”
De Laurentiis oo waraysi siinaayay Gaazeedka dello Sport ayaa intaasi raaciyya :”waxaa jira dagaal caalami ah oo isaga loogu jiro saxiixiisa.”
“si adeec iyo ixtiraam leh ayaan waqti dheer ka dib Lavezzi u soo dhawaynaynaa koox walbaa oo uu doorto isaga inuu ku biiro,taas oo ah xalka ugu wcaan isaga uguna wanagsan kooxda”
Weeraryahankaan Lavezzi ee kooxda Napoli ayaa kooxdiisa kula joogay heshiis dheer oo gaarayay tan iyo bisha June ee sanadka 2015 laakiin codsi akdib waxa ay kooxda Napoli doonaysaa inay ku iibiso aduun lacageed oo dhan £26.8million.
waana 27-jir Horyaalka Serie A kaga yimid naadiga San Lorenzo sanadkii 2008, waxa uuna kooxdiisa Napoli Xili ciyaareedkii dhamaday tartanka Serie A u dhaliyya 9 Gool 30 kulan oo uu saftay.